Kuedza IKEA HomeKit nemwenje yeTradfri | IPhone nhau
Kuedza iyo IKEA HomeKit nemwenje yeTradfri
Pane zano rekuti kumba michina inodhura, kunyanya kana tichitaura nezveKeKKit, asi chokwadi ndechekuti mitengo yezvinhu zvinoenderana neApple's home automation platform yadonha zvakanyanya sezvo vagadziri vakawanda vatanga kutamba. Uye kana chero mugadziri akatokwanisa kupa kwekupedzisira kubata kumitengo, ndeye IKEA, iyo ine yayo "Tradfri" renji inounza kumba otomatiki kune chero mushandisi ndiani asati afunga kupinda munyika ino muropa. Ndasarudza imwe yemubatanidzwa wakachipa kutanga nawo muKeKKit uye ndinokuratidza mashandiro ainoita muvhidhiyo ino uye muchinyorwa.
1 Bridge, mwenje uye switch
2 Kubatanidzwa neKeKKit
Bridge, mwenje uye switch
Tradfri ne IKEA inoenderana neKeKKit, Google ASsistant uye Alexa. Sezvazviri pachena, isu ticha tarisa pamashandisirwo ayo neKeanKit, asi kune mamwe mapuratifomu zvichave zvakafanana. Muvhidhiyo iri pamusoro pechinyorwa iwe uchaona iyo yese yekugadzirisa maitiro uye mashandiro ehurongwa, pamwe nemamwe mazano ezvemagetsi uye nharaunda. Kuti uite izvi iwe unozoda zvinotevera Tradfri zvinhu:
Tsika yekubatanidza yetsika: ndicho chinhu chinodhura zvakanyanya (€ 30) asi chakakosha kuti Tradfri zvishongedzo zvibatanidzwe muKiKit Inofambiswa nejaja uye micro USB tambo (inosanganisirwa) uye inosangana kune iyo router uchishandisa iyo Ethernet tambo (inosanganisirwa). Iko hakuna kubatana kweWiFi.
Tsika yechiedza inodzima: tichaishandisa kudzora mwenje yedu (batidza, dzima uye gadzirisa kusimba). Izvo zvakakoshawo kushandisa switch iyi kana chero imwe modhi inowanikwa, asi iyi ndiyo yakachipa (€ 6) uye ndosaka iyo yandakasarudza. Iyo ine hwaro hwatinogona kugadzirisa nesikuru kana kunamatira, kune iyo switch iyo magnetically yakasungirirwa, kuti tikwanise kuifambisa pasina matambudziko.
Tradfri LED 600 lumens E14 bhuru: (€ 6). Girobhu racho rinogadziriswa musimba uye tembiricha (haichinje ruvara)
Iko kushanda kweKit kuri nyore: iyo girobhu (kana mababu) inosanganisirwa neswitch inoidzora, uye switch neiyo yekubatanidza chishandiso. Kana switch iri kure kwazvo kubva kune chinongedzo, IKEA zvakare ine vanodzokorora vaunogona kuisa kuti uwedzere kusvika kwayo. Iyo kitu yese yakagadziriswa nekuda kweiyo Tradfri app (link) uye maitiro ese anogona kuonekwa kubva pakutanga kusvika pakupedzisira muvhidhiyo pakutanga kwechinyorwa.
Tsika dzechinyakare ndeye 100% IKEA maererano nedhizaina uye zvigadzirwa: dzakangwara, dzakachipa zvinhu asi zvakanyatsopedzwa. Sezvavanotaura, vanozadzisa basa ravo, asi havana kugadzirirwa kuiswa munzvimbo inoonekwa mukamuri, asi zvinopesana.
Kana zvese zvinhu zvagadziriswa, tinokwanisa kuwedzera zvishandiso kuKeKKit nekutarisa QR kodhi pachigadziko chemuchina wekubatanidza, uye zvese zvishandiso zvatakawedzera zvinoonekwa. Ivo zvakare vanoonekwa kwatiri vakazvimiririra, ndokuti, Kunyangwe ini ndakabatanidza matatu mabhuru kuchinjiso chimwe chete, ndine matatu mababu andinogona kushandisa ndakazvimiririra muImba app. Kubva pano, zvese zvinoshanda senguva dzose: kutonga kuburikidza neSiri, otomatiki, nharaunda, kutonga kuburikidza neImba app, kudyidzana nemidziyo kubva kune mamwe mabhureki ...
Kana iwe waifungidzira kuti nekuda kwekuti iwo aive akadhura michina vaizove nezvakaderera zvakanakira kupfuura vamwe, chokwadi ndechekuti iwe uchashamisika, nekuti mashandiro avo akarurama chaizvo, pamwe vanogona kuve nekumwe kunonoka pavanenge vachiita odha, asi icho chinhu chinotsungirira zvachose uye iro harisi dambudziko kuti iwe uve nerakanakisa mushandisi ruzivo. Ini ndinogona kupedzisa nekutaura kuti ini ndinofunga havazove vekupedzisira IKEA Tradfri zvigadzirwa zvandinotenga kuti ndirambe ndichiwedzera imba yangu otomatiki. Kana iwe uchida rumwe ruzivo nezve zvigadzirwa kana kuzvitenga, unogona kuzviita kuburikidza Iyi link kune iyo IKEA webhusaiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Kuedza iyo IKEA HomeKit nemwenje yeTradfri
Ndakaverenga kumwe kunhu kuti IKEA mwenje mabumba anogona kubatanidzwa kune philips zambuko, ichokwadi here ichi?
Iwe unogona, haisi yepamutemo uye ine matambudziko ayo, asi yakarasika
Iyo iPhone 12 Pro inogona kuve ne6GB ye RAM